MEGA PAK Zimbabwe (Pvt) Ltd - Directory - Zimbabwe | Easy Price Book Zimbabwe, better products ... better prices !
About MEGA PAK Zimbabwe (Pvt) Ltd ...
MEGA PAK Zimbabwe (Pvt) Ltd is the leading plastic converter in Zimbabwe.
MEGA PAK Zimbabwe (Pvt) Ltd was formed as a joint venture firm between Delta Corporation of Zimbabwe and Nampak Limited of South Africa in 1993. Today, MEGA PAK Zimbabwe (Pvt) Ltd is made up of the four operating units i.e Injection Moulding, Stretch (PET) Moulding, Blow Moulding and Roto-Moulding.
A significant range of MEGA PAK Zimbabwe (Pvt) Ltd products are exported to SADC and COMESA countries.
Serving the beverage, edible oils, chemicals, lubricants, water and detergents markets, MEGA PAK Zimbabwe (Pvt) Ltd products include:
• Bulk liquid storage containers
MEGA PAK Zimbabwe (Pvt) Ltd Contact Details:
MEGA PAK Zimbabwe (Pvt) Ltd business areas: